5 kuverengwa nhema kwazvo kweBlack Chishanu (kana Saxon Nhema Chishanu) | Zvazvino Zvinyorwa
5 kuverengwa nhema kwazvo kweBlack Chishanu (kana Saxon Nhema Chishanu)
The Black Friday, iyo Anglo-Saxon Nhema Chishanu uye kuunzwa kune idzi zvikamu zvedu, uye hapana chinhu chiri nani pane kutora mukana wakakosha kudzikira kwemitengo pane kuverenga. Ruzivo uye varaidzo hazvitore nzvimbo, asi mabhuku anotora zvishoma. Uye mumadhijitari avo vanodzikisa mitengo yavo zvakanyanya.
Semunhu anofarira kuverenga, ini ndichiri kufarira bepa, asi ini zvakare ndinoenderana nechero fomati yavanayo.nyaya dzandinoda. Uye iwo ndiwo akasviba, ndiko kuti, akakodzera eChishanu cheiyo vara. Saka ini ndinosarudza idzi shanu, dzakakwana zvipo zveiyo Nhema Chishanu.
1 LA Yakavanzika - James Ellroy
2 Zuva ra Chivabvu - Antonio Manzini
4 Nyota - Jo Nesbø
LA Chakavanzika - James Ellroy
Uye tinoenda parwendo. Kutanga takayambuka Atlantic kuti tisvike Pacific nehukuru pakati pevakuru, iyo Imbwa Inopenga James ellroy. Makumi makumi maviri apfuura iyo yakasarudzika yakajeka firimu inoenderana nebasa rake rinozivikanwa, LA Chakavanzika, saka ndeipi nzira iri nani yekuitsvaga kana kuidzokorora.
Iri bhuku rakaomarara rakanetsa kunyangwe vaverengi vanorema kwazvo, asi zvakafanira kuti unzwisise uye ushamiswe naro. ane mhirizhonga uye yakajeka mufananidzo uyo Ellroy akarondedzera nezve Los Angeles muma50s kuburikidza nemapurisa matatu yeLAPD yake inozivikanwa. Pasina kubvumirana uye neteregirafu uye yekucheka maitiro, iyo yakasanganiswa asi inokwezva zano inoratidza yakasviba divi reguta iro uye iwo makore.
Zuva ramay - Antonio Manzini
Tichidzokera kuEurope yekare, tinoenda kutanga kumaodzanyemba, kuItari neAosta Valley kunosangana nemuongorori anoshamisa Rocco Schiavone, naAntonio Manzini. Avo vedu vakawira vakazvipira kuhunhu hwake asiwo kune tsitsi dzake uye kudanana mukutanga kwake mu Nzira nhema, isu tatevera Schiavone kuburikidza nedzimwe nyaya nhatu. Yekupedzisira, iyo Zuva ramay, yatosvika mukukura uye nhoroondo inosimbisa. Inokosha kune vanodikanwa ehunhu hunhu hweitaly maitiro avo avanorima nawo matsotsi enhau.
Ipapo takakwira zvishoma kuParis kunopa kaputeni kutsvoda katatu Victor mutengo. Ini ndaizozviita, uye musiki waro, aimbova mutongi wemapurisa Olivier Norek. Domino mhedzisiro iri zita hombe, mubairo muna2016 kune yakanakisa nhoroondo yeEuropean yekuparwa kwemhosva, uye inonakidza uye inoshamisa yakanyatsovakwa-nano, ine zano uye mavara anokunda kufarirwa yevaverengi. Uye zvakare zvinoratidza kuti chero munhu akazvinyora ane akanakisa matafura, iwo chaiwo. Kuwanikwa
Nyota - Jo Nesbø
Tevere tinoenda kuchamhembe kwekuchamhembe nemumwe wevakanyanya uye vakabudirira kwazvo vanakomana vekuNorway kutonhora. Jo Nesbø iyo nhema yakasviba (uye salmon) yeiyo mabhadharo inoenderera uye munaKurume wegore rino akapa runyorwa rwake rwekupedzisira parwendo rwepasirese, Nyota. Ndiyo yegumi neimwe nyaya yezvikamu zvakateedzana nechisikwa chayo chakakwidziridzwa uye chinodiwa, Commissioner Harry hole. Ino nguva Hole ichatarisana nazvo mhondi izvo zvakamutiza Mapurisa uye vane avo vanobatwa vashandisi veTinder yekutaurirana network.
Chero ani anochiziva uye akachiverenga anonyatsoziva icho chakanaka chinyorwa chine maoko. Kune vaverengi veNeophyte veNesbø, kunyange mabhuku ari munhepfenyuro idzi achigona kuverengerwa zvakasununguka, hazvikurudzirwe kuti utange imba nedenga nekuti ucharasika ne vatambi uye mamiriro ezvinhu anga aripo kwemakore makumi maviri nedzimwe nyaya gumi. Asi kune nesboadictos iyo inofanirwa kuverengerwa.
Uye pakupedzisira, ruzivo rwuchangobva mumazuva mashoma apfuura iyo ndiyo nyaya yechinomwe yeiyo Dhipatimendi Q uye ma protagonists ayo, irascible Carl Morck uye mubatsiri wake akasarudzika Assad.
Mupaki iri muCopenhagen inoonekwa iyo chitunha chembere. Commissioner Carl Mørck anotumwa kuti aongorore humhondi uhu, hune mamiriro ane chekuita nekumwe kufa kwakaitika makore apfuura. Panguva imwechete a serial mhondi inopinda mukumhanya pamusoro pevakadzi vadiki. Uyezve, maneja weDhipatimendi reQ havagutsikane nemutengo wakaderera wekugadzirisa nyaya uye vanoda kucheka chikamu chemari yedhipatimendi.
Asi Rose, mubatsiri waCarl Mørck, ari kuendawo munguva yakaipa. Anotambudzwa nezviyeuchidzo zvezviitiko munguva yake yakapfuura izvo zvinomumanikidza kuti apinde muchipatara chepfungwa. Uye pakupedzisira, chii chine chekuita neichi mushandi wezvemagariro ane hasha uye vakadzi vatatu vechidiki vakanaka vane hanya nechitarisiko chavo, vanosangana mukamuri yekumirira muhofisi yake uye kuti vafe nguva yavanogadzira selfie?
Zvisinei, ngano shanu dzakasiyana senge neyakajairwa poindi yeutema inokanganisa zveseasi izvo hazvizombo gone pamwe nechiedza chinogara chiri pasi pacho. Nyaya shanu dzakakurudzirwa zvikuru dzeChishanu Chishanu ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 5 kuverengwa nhema kwazvo kweBlack Chishanu (kana Saxon Nhema Chishanu)
"Fugas", iro bhuku idzva nemuimbi James Rhodes
Charles Perrault: biography uye yakanakisa nyaya dzevana